» “माइतीले दुवै हात नहुने संग किन, बिवाह गरेको ? छोडेर आइज त्यसले कसरि, पाल्छ तर म उसलाई छोड्न सक्दिन, बरु मर्छु भन्छिन् एलिना (भिडियो सहित)” “माइतीले दुवै हात नहुने संग किन, बिवाह गरेको ? छोडेर आइज त्यसले कसरि, पाल्छ तर म उसलाई छोड्न सक्दिन, बरु मर्छु भन्छिन् एलिना (भिडियो सहित)” – हाम्रो खबर
“माइतीले दुवै हात नहुने संग किन, बिवाह गरेको ? छोडेर आइज त्यसले कसरि, पाल्छ तर म उसलाई छोड्न सक्दिन, बरु मर्छु भन्छिन् एलिना (भिडियो सहित)”
2021, June 4th, Friday
“बाके समसेरगंज स्थित एक प्रेम जोडी अहिले काम को खोजि मा काठमाडौँ सम्म आएका छन्। प्रेम बिबाह गरेका सुरेश र एलिना ले ३ बर्ष को प्रेम बाट बिबाह गरेका हुन्। बिबाह पछि संगै मर्ने संगै बाच्ने भनि कसम खाएर बिबाह गरेका यो जोडी अहिले काठमाडौँ सम्म आएका छन्। काम को सिलसिला मा लम्जुङ्ग गएका सुरेश ले मिस्त्री काम गर्ने क्रम मा करेन्ट लागेर सुरेश ले अहिले दुवै हात गुमाएका छन्।
“दुवै हात गुमाए संगै सुरेश ले केहि काम गर्न नसक्ने अवस्था मा पुगे , उनि घर फर्किए। घरमा अब सबैको हेला हुन्छु भनेर निरास भएका सुरेश लाई श्रीमती एलिना ले साथ् दीईन। श्रीमान जस्तो अवस्था मा भए पनि मैले साथ् दिनु पर्छ, प्रेम बिबाह गरे पछि साथ् छोड्नु हुदैन भनेर एलिना ले अहिले सम्म साथ् दिएकि छिन्। गाउ घर मा मेला पात गरेर भए भनी श्रीमती ले सुरेश लाई खुशी दिएकि छिन्।
“मायाको चिनो को रुप मा एक छोरि को जन्म भएको थियो , छोरि को पनि उपचार गर्न नसकेर १ महिना मै मृत्यु भयो। सहयोग गर्ने कोहि नभए पछि उनीहरु कामको लागि काठमाडौँ आएका छन्। माइती ले सधै सुरेश लाई छोड , त्यो बाट केहि सुख हुदैन , भनि सधै बोलाउछन्। मैले सुरेश लाई धेरै माया गर्छु त्यसैले छु’टाउछन् भनि हामी यहाँ सम्म आएका छौ। तर यहाँ काम पाउन धेरै गा’र्हो हुदो रहेछ।
“यो जोडी को बिजोग भए पछि अहिले को लागि भोजराज थापा ले २५०० सहयोग गरेका छन्। मलाई जसले जे भने पनि मैले श्रीमान लाई छोड्ने छैन। मैले आफै मन पराएर बिहे गरेको हो , म श्रीमान भन्दा ४ बर्ष ले जेठी छु , त्यसैले मैले उहाको सबै पिडा बुज्ने गर्छु। म पनि पेट सम्बन्धि बिरामी छु। पाए काम गर्छु संगै बस्छौ। सुरेश भन्छन मलाई मेरो श्रीमती ले धेरै माया गर्छे। मैले पनि उसलाई धेरै माया गर्छु , मैले सकेको काम मा पनि सहयोग गर्छु।